यी हुन यौन जीवनमा तगारो ल्याउने तत्व - Baikalpikkhabar
यी हुन यौन जीवनमा तगारो ल्याउने तत्व
यौन जीवनले दाम्पत्यमा खास प्रभाव पार्छ । यौनले शारीरिक सन्तुष्टि दिन्छ, मानसिक तनाव कम गर्छ, साथसाथै दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ । तर, यौन जीवनमा तगारो ल्याउने केहि तत्व हुन्छन् ।
इटेक्टाइल डिसफंशन :
गर्भनिरोध औषधि :
जुन व्यक्तिको तौल बढी हुन्छ, उसको फ्याट सेल एस्ट्रोजेन ९फिमेल हर्मोन० उत्पादन गर्छ । यसले उनको यौन९रुचीमा कमी ल्याउँछ । नियमति व्यायम गर्नेको यौनक्रिया राम्रो हुन्छ, सक्रिय हुन्छ । त्यसैले व्यायमलाई आफ्नो तालिकामा सामेल गरेर यौन जीवनलाई सक्रिया बनाउनुपर्छ ।
सोमबार, ०४ साउन, २०७८, दिउँसोको ०४:५५ बजे
म ४८ वर्षे स्वस्थ पुरुष हुँ । पाँच वर्षअघि मेरी श्रीमतीले मलाई केही नभनी अरु कसैसँग विवाह गरिन् । केही वर्षसम्म उनलाई सम्झेर मेरो जीवन बित्यो । पहिले अरु महिलाप्रति मेरो उति राम्रो दृष्टिकोण थिएन । तर, विस्तारै पुरुषको जीवनमा
एमालेले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक, नेपाल पक्ष नजाने
२ साउन, काठमाडौं / नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहान एघार बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बस्ने उनले बताए । त्यसअघि
यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
२३ जेठ , भक्तपुर/ विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ७ गुण्डुका १३ वर्षीया किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक शिक्षक र तेक्वाण्दो प्रशिक्षकलाई प्रहरीले फक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा गुण्डुका
रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने अर्को उपाय
चुम्बन, प्रेम अनुभूतिको प्रतिक मानिन्छ । प्रेमी जोडीले आफ्नो भावनालाई चुम्बनको माध्यमद्वारा व्यक्त र साटासाट गर्दछन् । तर, चुम्बन केवल प्रेमको अभिव्यक्तिमा मात्र नभई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि फाइदाजनक छ । १. तनाव कम चुम्बन गर्दा शरीरमा अक्सटोसिन नामक हर्मोन पैदा
रोमान्टिक = नन सेक्सुअल टच
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास ।
६ हजारको ब्याजवापत चार वर्षदेखि यौन शोषण
रासस, सोलुखुम्बु / थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–९ की ४१ वर्षीया महिला चार वर्षदेखि यौन तथा श्रम शोषणमा परेको घटना बाहिरिएको छ। छिमेकी ६८ वर्षीय खड्गबहादुर राईले ६ हजार रुपैयाँ ऋण दिएपछि बारम्बार श्रमसँगै यौन शोषण गर्ने गरेको पीडित महिलाको दाबी छ।
काठमाडौं, साउन ११/ कित्ता क्लियर गर्न माधव नेपाललाई...